China ngokwezifiso izinga izingane izingane iyunifomu ukotini pique polo amahembe ifektri abakhiqizi | Umbono
ngokwezifiso izinga izingane izingane iyunifomu ukotini pique polo amahembe
Gqokisa ingane yakho into encane ehlakaniphile ngehembe lezingane zethu futhi ubonise indalo yakho emangalisayo ngokwakha ipolo ngemiklamo nezithombe zakho ozithandayo.
Izingane zethu polo shirts kufanelekile uhla enkulu izingane abaneminyaka futhi ekahle ebaleni lokudlala, inkundla yezemidlalo noma bafake isikole. Ifaka izinkinobho ezi-2 futhi zenziwe ngo-100% pique cotton le polo ehlakaniphile, ethokomele ibukeka ihlakaniphile unyaka wonke. Yakha amahembe wakho wezingane kalula ngokungeza umbhalo wangokwezifiso, izithombe noma imiklamo!
Kusho ukuthi uthola okungcono kunakho kokubili imihlaba! I-polo entsha ebukeka intsha iqembu lakho elizothanda ukuyigqoka.
Usayizi Ubude bomzimba Isifuba Ubude bemikhono
Langaphambilini Amatshitshi ama-sweatshirts wezingane asetshenzisiwe angumuntu siqu i-pullover hoodie engenakulinganiswa
Olandelayo: Tank Phezulu
Ihembe lePolo Lady
Ihembe lephepha lombhoxo